Magic Keyboard for iPad Pro famerenana: manakaiky ny MacBook. | Vaovao IPhone
Ireo izay maniry ny hahatongavan'ny iPad ho MacBook dia mahita ny nofinofin'izy ireo amin'ny dingana farany apetrak'i Apple. Ny Magic Keyboard vaovao, kitendry backlit miaraka amina trackpad ary mekanika fametahana indroa tena mahafinaritra, mahatonga ny elanelana misy eo amin'ny iPad Pro sy MacBook tsy azo tsinontsinoavina.
Apple dia mandray dingana fohy ary mandeha miadana ihany koa, miadana tokoa indraindray, saingy mazava be ny toerana alehany, ary mandroso tsy azo sakanana mankany izy. Ny ohatra tsara indrindra anananay miaraka amin'ny iPad Pro, izay tamin'ny taona 2018 dia nahazo USB-C hahafahana mampifandray ireo peripheraly mahazatra, mahafoy ny mpampitohy Lightning izay mitohy mitazona ao amin'ny sisa amin'ny fitaovan'ny iOS. Tamin'ny taona 2019, nisaraka tamin'ny iOS ny iPadOS, ka ny iPads dia efa nanana ny rafitra fiasan'izy ireo manana ny mampiavaka azy noho ny iOS. Tamin'ny taona 2020, tonga ny fanohanana totozy sy trackpad taorian'ny famoahana ny iOS 13.4, ary Apple nanararaotra nanangana keyboard vaovao: Magic Keyboard.
Kitendry backlit misy lakile mahazatra (mekanisma scissor) ary miaraka amina trackpad integrated. Nofinofy ho an'iza vao volana vitsivitsy lasa izay. Ary vitany ihany koa izany tahaka ny fantatry ny Apple ny fanaovana zavatra, satria fonony fitehirizam-bokatra maro no azo atao, saingy i Apple irery no nieritreritra ny iray izay mahatonga ny iPad "hitsinkafona" ambonin'ny keyboard, miaraka amina rafitra hinge roa izay mahatonga anao hitia hatramin'ny fotoana nahitanao azy voalohany, ary rehefa manandrana azy ianao dia mamela anao hitsiky fotsiny. Ary ny tsara indrindra dia ny mifanaraka amin'ny iPad Pro 2018, amin'ny antsipiriany.
1 Kitendry toy ny MacBook
3 Volavola matanjaka sy mavesatra
4 Smart Connector, mampisy fahasamihafana
Kitendry toy ny MacBook
Apple dia nanao izay nataony ihany: fampitaovana ny iPad amin'ny fitendry mitovy amin'ny MacBook anao. Ny "taloha" Smart Keyboard dia manana tombony maro, toy ny maivana sy ny mahia, fa ny traikefa rehefa tsy manoratra ao anatin'ireo tombony ireo ny fanoratana, fa ny mifanohitra amin'izay, na dia lasa zatra an'ireny fahatsapana fanerena bokotra "bubble" ireny aza ianao. Fa rehefa miverina mampiasa keyboard mahazatra ianao dia tsapanao fa izany no fahatsapana tadiavinao. Ity Magic Keyboard vaovao ity dia manome anao ny fahatsapana mitovy amin'ny fanoratana amin'ny MacBook Pro anao, miaraka amin'ny mekanisma hety izay vao naverin'i Apple taorian'ny zava-dratsy niainany tamin'ny fitendry lolo.
Kitendry fitoviana mitovy habe amin'ny fanalahidy, miaraka amin'ny dia ihany, miaraka amin'ny feo mitovy rehefa manoratra ... ary ny tsara indrindra, miaraka amin'ny backlighting mitovy amin'ny MacBook. Ny rafitra backlight dia fehezina ihany koa arakaraka ny hazavana manodidina izay azon'ny iPad, ary manome anao ny jiro mety tsara amin'ny toe-javatra tsirairay. Raha te handamina azy ianao dia azonao atao amin'ny fikirakira iPadOS, eto dia tsy misy bokotra voatokana ho an'io fiasa io. Tsy misy bokotra koa hamonoana ny jiro, saingy tena tsy ilaina izany satria maty ny klavier rehefa mandray segondra vitsy ianao nefa tsy mampiasa azy, ka raha mijery sary mihetsika amin'ny maizina ianao dia tsy hanelingelina ny klavier ianao.
Ary io ve ny iray amin'ireo lesoka an'ity kitendry ity dia bara fiasa eo an-tampony, miaraka amin'ireo bokotra klasika mba handaminana ny habeny, ny famirapiratan'ny efijery sns Ary lakilen'ny Escape, izay tsapanao fa ilaina izany rehefa tsy anananao. Azontsika atao foana ny mamerina manamboatra ny lakile avy amin'ny fikirana ary manamboatra (ohatra) ny hidin-doha mba hitondra toa izao. Azontsika atao ihany koa ny mianatra ny hitsin-dàlana fitendry tsy manam-petra hanaovana asa maro ary noho izany dia mitsitsy fotoana, fa tadidio fa maro no tsy mitovy amin'ny macOS. Ny cmd + Q malalako hivoaka fampiharana iray eto dia cmd + H. Tsy ho ela intsony raha tsy diso eo amin'ny macOS aho fa tsy iPadOS.
Ny fialan-tsiny ho an'ity Magic Keyboard vaovao ity dia ny trackpad-ny. Apple dia nanararaotra ny fampidirana an'io singa io mba hamolavolana endrika tanteraka ny kitendry, ary nanova zavatra be dia be toa ny trackpad no kely indrindra aminy, raha ny tena mampiavaka azy indrindra. Ary io ilay trackpad tsy ho ela dia lasa any aoriana, satria tsy mahagaga izany. Aza diso, trackpad tsara dia tsara izay efa tadiavin'ny solosaina finday avo lenta, saingy efa zatra ny trackpad misy Force Touch amin'ny MacBook ity trackpad ity toa lany andro amiko, satria ny bara ho an'ny trackpads any Apple dia avo dia avo, ary ity iray ity somary latsaka ambany ambany.
Tonga lafatra ny asany, afaka manindry na aiza na aiza amin'ny trackpad misy valiny eo noho eo, ary koa ny mety hanaovana fihetsika amin'ny rantsantanana iray, roa ary telo. Averina indray, nofinofy ho an'izay nanandrana ireo làlan-kaleha mampalahelo izay matetika no entin'ny solosaina finday mpifaninana ... fa ny zava-misy dia trackpad mekanika izany dia midika fa tsy maintsy apetratsika eo ambany io. Azo antoka fa ny hatevin'ny fitendry dia mety ho fetran'ny famerana, fa Apple io, mila mitaky ny ambony indrindra foana ianao.
Misisika aho: mahafinaritra ny mampiasa ny iPad hifindra eo anelanelan'ny rindranasa, ny birao, ny sela voafantina ao amin'ny Excel na ny soratra amin'ny Word, mivoaka fampiharana na mandefa multitasking. Ireo fihetsika dia tena mitovy amin'ireo izay efa nampiasaintsika tamin'ny macOS, na dia misy aza ny tsy fitovizany. Heveriko fa ny iOS 14 dia hanafotra ity fizarana ity amin'ny fihetsika vaovao sy ny fiovaovan'ny toetr'andro ankehitriny, toy ny hatao amin'ny Slide Over, ilay tsy dia maharesy lahatra ahy amin'ny fihetsika rehetra.
Volavola matanjaka sy mavesatra
Ny kalitaon'ny fananganana ny Magic Keyboard dia avo dia avo. Raha vantany vao namboarinao ny takelaka fitendry amin'ny alàlan'ny andriamby an'ny roa, dia toa singa tokana ny zava-drehetra. Raha omenao ny olona tsy manam-pahalalana hoe inona ilay iPad Pro na Magic Keyboard, dia tsy ho hain'izy ireo ny hahafantatra fa tena singa roa izy ireo. Ary na izany aza, ny fahatsorana ahafahanao manala ny iPad anao ary mamerina azy dia mahavariana. Ary ahoana ny amin'ireo hinge roa mamela ny hetsika hanokatra sy hampifantoka ny iPad mankany aminao. Toa tsy mampino fa misy zavatra tena tsotra afaka manome anao fahatsapana fahalavorariana tanteraka toy izany. Ny fanokafana ny iPad, ny fametahana ny efijery eo anelanelan'ny 90 sy 130 degre azo avela, fanakatonana ny iPad, fihetsika tena voadinika tsara tokoa ireo ary amin'ny fomba mazava tsara ka ny minitra voalohany ampiasanao ny Magic Keyboard dia natokana ho an'io fotsiny.
Ny "Pro Pro" dia mitsingevana "ambonin'ny klavier, saingy tsy mahavita azy akory, manao azy toy ny hoe sakana tokana miaraka amin'ny fonony sy ny kitendry izy, na dia kely aza ny fahaizanao. Ary raha manova diplaoma roa monja ianao, dia hahazo fahatsapana tokana tokana ihany. Tsy misy toerana marihina, farafaharatsiny farafaharatsiny sy farafahakeliny ihany, ary eo anelanelan'ny roa amin'ireo dia misy toerana hafa azo atao. Ny sety iPad Pro + Magic Keyboard dia mety amin'ny fanoratana amin'ny tongotrao, na farafaharatsiny tonga lafatra toy ny laptop rehetra. Fa ny tsy lafatra dia ny fampiasana ny Apple Pencil, satria tsy avelany hapetraka ambonin'ny iPad ny fisaka. Eny, azonao atao ny manala ny klavier ary mampiasa ny iPad eo ambony latabatra handraisana na hanoratra miaraka amin'ny Apple Pencil, fa iriko raha tsy izany.
Saingy lafo avokoa izany rehetra izany, ary izany dia manana lanjany ambony kokoa noho ny iPad Pro tenany ity fitendry ity.Sy Magic Keyboard ho an'ny iPad 12,9-inch dia milanja 710g, raha ny iPad Pro aza milanja 641g. Miaraka milanja 1.310g izy ireo, izay kely lavitra noho ny milanja MacBook Air 13 "ary kely kely noho ny lanjan'ny MacBook Pro 13".. Solosaina finday tena maivana no resahina, ka tsy izany no olana na kely aza. Tsy tokony hadinontsika fa ity fitendry ity dia natao "hamadika" ny iPad-nao ho laptop. Raha te hampiasa azy io ianao hijerena sinema na lalao dia aleo mividy fonony mahazatra, mora vidy kokoa sy maivana kokoa.
Izahay koa dia mandoa ny vidin'ny hateviny, na dia tsy mihoatra lavitra noho ny Smart Keyboard teo aloha aza. Saingy mazava izahay fa mila fitendry mekanika, backlit ary misy trackpad izahay, ary fonosana matanjaka ihany koa io. Mampatsiahy ahy ireo boribory telo ireo miaraka amin'ny teny hoe "mora vidy, vita tsara" izay ampahatsiahivin'ny namana mpanao mari-trano ahy isaky ny mahazo fotoana kely izy. Misy zavatra tokony takiana amin'ny Apple hanatsarana azy, fa misy kosa ny hafa izay tsy azo tanterahana ara-batana raha tsy voaporofo fa tsy izany. Ny mijanona tsy miova raha ny momba ny Smart Keyboard dia ny fiarovana kely atolotray ho an'ny iPad, satria mbola malalaka tanteraka ny sisiny. Mazava ho azy, raha mila fiarovana bebe kokoa isika dia ho lehibe kokoa ny hateviny, mila mijery fotsiny ny Logitech Slim Folio Pro isika mba hahazoana hevitra.
Smart Connector, mampisy fahasamihafana
Tsy niresaka momba ny bateria na fifandraisana izahay satria tsy ilaina ny miresaka momba an'izany. Ny Magic Keyboard dia mampiasa ny Smart Connector miorina ao aorian'ny iPad Pro anao hiasa, amin'ny alàlan'ny batterin'ny iPad-nao, ary ny fampitana ny fampahalalana ilaina amin'ny fomba mitovy. Ity dia miantoka fa ny fihetsiky ny Trackpad sy ny soratra dia miseho tsy misy hatak'andro, ary misy ny fifandraisana Bluetooth ho an'ny fitaovana hafa tianao ampifandraisina. Ianao koa dia manana ny mpampitohy USB-C an'ny iPad Pro maimaim-poana, satria ny Magic Keyboard dia manana USB-C ahafahanao mamerina ny iPad Pro, mamela ny fampifandraisana mikrô, disk na fakantsary ivelany amin'ny fotoana itondranao azy fa tsy mila dock na mitovy aminy. Io USB-C an'ny Magic Keyboard io dia mamela ny famahana ny iPad Pro fotsiny fa tsy ny fampifandraisan'ny fitaovana hafa.
Nasehon'i Apple tamin'ny Magic Keyboard vaovao azy fa miavaka hatrany izy io raha ny famolavolana vokatra mandatsaka valanorano. Kalitao fananganana faran'izay tsara ho an'ny fonony fitendry izay toy ny fitendry sy ny trackpad tsy vitan'ny fankatoavana fa mahazo grade A. mamela anao am-pitiavana hatramin'ny minitra voalohany. Saingy tsy maintsy mandoa vidiny lafo ianao, ary tsy miresaka fotsiny amin'ny € 399 € izay vidin'ny maodely 12,9-inch (339 € ho an'ny maodely 11 ") fa ny lanjan'ny lanja sy ny hatevin'ny iray manontolo ihany. Fa raha mampiasa ny iPad Pro ianao toa ny solosaina finday, dia andoavana vola ity ezaka ity nefa koa amin'ny fahafinaretana.
Tsara endrika sy manangana kalitao
Kitendry backpad sy trackpad
Smart Connector, tsy misy bateria na Bluetooth
Azo ahodina 90-130 degre
Mavesatra sy matevina
Tsy misy laharana ny bokotra fiasa
Tsy azo apetraka mitsivalana eo ambony latabatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Magic Keyboard for iPad Pro famerenana: manakaiky ny MacBook.